सफाइ पाएपछि पूर्व कप्तान थापाको प्रश्न : मेरो ६ वर्ष कसले फिर्ता गर्छ ? – HostKhabar ::
सफाइ पाएपछि पूर्व कप्तान थापाको प्रश्न : मेरो ६ वर्ष कसले फिर्ता गर्छ ?
काठमाडौं : नेपाली फुटबलमा पहिलो पटक खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) को आरोप लागेर आफ्नो खेल जीवनको उत्कृष्ट समय गुमाएका खेलाडी सागर थापाले प्रश्न गरेका छन् : ‘मैले खेल गुमाउनु परेको ६ वर्ष कसले फिर्ता गर्छ ?’
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो। राष्ट्रिय फुटबल टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, विकाससिंह क्षेत्री, रितेश थापा, सन्दीप राई, प्रशिक्षक तथा पूर्व खेलाडी अन्जन केसी र फिजियोथेरापिस्ट डेजिव थापाविरुद्ध म्याच फिक्सिङको आरोप लागेको थियो।
सफाइ पाएपछि नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै सागर भन्छन्– ‘नगरेको अपराधबाट सफाइ पाउँछौँ भन्ने त थाहा थियो। तर यो गम्भीर दाग लगाएर हामीलाई खेलबाट यत्रो वर्ष बाहिर राखिदिएका छन्। मेरो ६ वर्ष कसले फिर्ता गर्छ ?’
सर्वोच्चको फैसलापछि सन्दीप राई भन्छन् : फिफामा लड्न बाटो खुल्यो
‘हामीले खेलिरहेको समयमा नभएको त्यस्तो आरोपले देशभर नै गलत सन्देश गयो। एन्फाले पनि केही सोचेन। अब त एन्फाले केही सोच्ला कि। हामी अपराधि होइनौँ भन्ने त प्रमाणित भयो अब त्यसको मूल्याकंन कसले गर्नेरु जीन्दगी नै वरवाद भयो नि’ सागरले भने।
उनीहरुलाई यसअघि विशेष अदालतले २०७५ जेठ २४ गते उक्त अभियोगमा निर्दोष रहेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो। विशेषको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले २०७५ मंसिर २० गते पुनरावेदन गरेको थियो।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाउँदाको समय।
तत्कालिन समय राष्ट्रिय टिमका कप्तानसमेत रहेका थापा भन्छन्– ‘कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा गम्भीर आरोप लगाउने काम राम्रो होइन। अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने त केही सोच्न सकेको छैन। अब दिमागमा एउटै कुरा छ खेर गएको समय कसले जिम्मेवारी लिने हो ?’